Shiinaha ayaa noqday soo saaraha iyo dhoofinta ugu badan ee alaabooyinka ladagaalanka cudurrada faafa sida maaskaro iyo dharka difaaca | Sinnovation
Thanks to xakamaynta wax ku oolka ah ee loo yaqaan 'coVID-19' ee guriga iyo kororka la taaban karo ee awoodda wax soo saar ee khuseeya, Shiinaha wuxuu noqday soo saaraha ugu badan uguna dhoofiya ee maaskarada, dacwadaha ilaalinta iyo alaabooyinka kale ee ka hortagga cudurrada, ka caawinta dalal badan oo adduunka ah inay la dagaallamaan aafada. Marka laga reebo Shiinaha, sida lagu sheegay warbixinnada la daabacay ee wariyeyaasha Global Times, dalal badan ama gobollo badan ma sii wadaan dhoofinta agab caafimaad.
The New York Times ayaa dhowaan soo warisay in wax soo saarka maalinlaha ah ee Shiinaha ee wajiga loo duugo uu ka booday 10 milyan horraantii Febraayo illaa 116 milyan oo kaliya afar toddobaad kadib. Sida laga soo xigtay warbixinta Maamulka Guud ee Kastamyada Jamhuuriyadda Dadka ee Shiinaha, laga bilaabo Maarso 1 illaa Abriil 4, qiyaastii 3.86 bilyan oo waji-waji ah, 37.52 milyan oo dacwadood oo ilaalin ah, 2.41 milyan oo ah qalabka ogaanshaha heerkulka infrared, 16,000 hawo-bixiyayaal, 2.84 milyan oo kiis oo sheeko Coronavirus ah. qalabka wax lagu ogaado iyo 8.41 milyan oo muraayadaha indhaha ah ayaa laga dhoofiyay dalka oo dhan. Saraakiil ka tirsan Waaxda Ganacsiga Dibadda ee Wasaaradda Ganacsiga ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in laga soo bilaabo 4-tii Abriil, 54 waddan iyo gobollo iyo seddex hay'adood oo caalami ah ay la saxiixdeen qandaraasyo soo iibsi ganacsi oo loogu talagalay sahay caafimaad oo lala galo shirkadaha Shiinaha, iyo 74 dal oo kale iyo 10 urur caalami ah ay wadaan ganacsi. wada xaajoodka wax soo iibsiga ee lala yeelanayo shirkadaha Shiinaha.
Marka la barbardhigo furitaanka Shiinaha ee dhoofinta sahayda caafimaadka, dalal aad iyo aad u tiro badan ayaa xayiraad ku soo rogaya dhoofinta waji-shareerka, hawo-mareenada iyo agabyada kale. Warbixin la soo saaray dhamaadkii bishii Maarso, Kooxda Caalamiga ah ee Digniinta Caalamiga ee Jaamacadda St. Gallen ee Switzerland ayaa sheegtay in 75 dal iyo dhulal ay ku soo rogeen xayiraad dhoofinta sahayda caafimaadka. Macnaha halkan, dalal badan ama gobollo badani ma dhoofiyaan sahay caafimaad. Sida ay qortay warbaahinta, 3M oo Mareykan ah ayaa wajiyadoodii u dhoofiyay dhawaan Canada iyo wadamada Latin America, sidoo kale New Zealand ayaa sidoo kale diyaarado u dirtay Taiwan si ay u qaadaan sahay caafimaad. Intaas waxaa sii dheer, waji-shareerka qaarkood iyo xirmooyinka tijaabada ayaa sidoo kale laga dhoofiyaa Koonfurta Kuuriya, Singapore iyo dalal kale.
Lin Xiansheng, oo ah madaxa soo saaraha wax soo saarka Caafimaadka ee fadhigeedu yahay gobolka Zhejiang, ayaa u sheegay Global Times Isniintii in saamiga dhoofinta Shiinaha ee waji-xidhka iyo astaamaha ilaalinta ay kor u kacayso adduunka, iyada oo kaliya ay yar tahay kororka dhoofinta hawo-mareenada iyo alaabada kale. Badeecooyin badan oo caafimaad oo ay leeyihiin shirkado caalami ah ayaa lagu calaamadeeyay calaamado shisheeye, laakiin waxsoosaarka dhabta ah wali wuxuu ku sugan yahay Shiinaha. Mr. Lin wuxuu sheegay in marka loo eego baahida jirta iyo baahida jirta ee suuqyada caalamiga ah, Shiinuhu yahay awoodda ugu weyn ee ugu weyn dhinaca dhoofinta sahayda caafimaad.